Chii chinonzi alimony?
MuNetherlands alimony imupiro wemari kumubhadharo wehupenyu wewawakanga uri mudiwa wako nevana mushure mekurambana. Imari yaunogamuchira kana yaunofanira kubhadhara pamwedzi. Kana iwe usina mari yakakwana yekurarama, unogona kuwana alimony. Uchafanira kubhadhara mari yesmony kana murume wawaimbova naye asina mari yakakwana yekuzviriritira mushure mekurambana. Maitiro ehupenyu panguva yemuchato anozotarisirwa. Iwe unogona kuve uine chisungo chekutsigira waimbova-wawakaroorana naye, wekare-akanyoreswa mudiwa uye nevana vako.
Mwana alimony uye mudiwa alimony
Pakaitika kurambana, unogona kutarisana newaunodyidzana naye alimony uye mwana alimony. Nezve kune waunodyidzana naye alimony, iwe unogona kuita zvibvumirano nezve izvi newaimbova mudiwa wako. Izvi zvibvumirano zvinogona kuiswa pasi muchibvumirano chakanyorwa negweta kana notari. Kana pasina chakabvumiranwa pamubhadharo wemumwe wako panguva yekurambana, unogona kunyorera kuti uwane rubatsiro gare gare kana, semuenzaniso, mamiriro ako kana ewawakambove mudiwa wako achinja. Kunyangwe kana huripo huripo huripo huripo hweanonyanyisa husisiri hunonzwisisika, unogona kuita gadziriro nyowani.
Nezve mwana alimony, zvibvumirano zvinogona zvakare kuitwa panguva yekurambana. Izvi zvibvumirano zvakaiswa pasi muchirongwa chekurera vana. Mune ino hurongwa iwe uchaitawo gadziriro dzekugoverwa kwekuchengetwa kwemwana wako. Mamwe mashoko nezve chirongwa ichi anogona kuwanikwa pane redu peji nezve chirongwa chekurera vana. Mwana wekuriritira haamire kusvikira mwana asvitsa makore makumi maviri nerimwe. Zvinogoneka kuti mari yekumira inomira pamberi pezera iri, kureva kuti kana mwana achizvimiririra mune zvemari kana aine basa riine mari shoma yevechidiki. Mubereki ane hanya anogamuchira rutsigiro rwemwana kudzamara mwana asvitsa makore gumi nemasere. Mushure meizvozvo, mari yacho inoenda yakananga kumwana kana chisungo chekuchengeta chichigara kwenguva refu. Kana iwe newawakamboita naye musingakwanise kusvika pachibvumirano pamusoro pekuchengetwa kwemwana, dare rinogona kutonga nezvehurongwa hwekuchengetedza.
Iwe ungaverenga sei kuriritira?
Alimony inoverengwa pahwaro hwesimba remunhu ane chikwereti uye zvinodiwa nemunhu ane kodzero yekuchengetwa. Iko kugona ihwo huwandu hunopihwa neanobhadhara wemamonyu. Kana zvese zviri zviviri zvekubatsira mwana neanobatsirana naye alimony zvichishandisirwa, rutsigiro rwemwana runogara rwuchitangira Izvi zvinoreva kuti mwana alimony anoverengerwa kutanga uye, kana paine nzvimbo yazvo mumashure, mudiwa alimony anogona kuverengerwa. Iwe unongori nekodzero yekudyidzana naye alimony kana iwe wakamboroora kana mune yakanyoreswa kudyidzana. Panyaya ye alimony yemwana, hukama pakati pevabereki hauna basa, kunyangwe kana vabereki vanga vasina hukama, kodzero yemwana alimony iripo.
Alimony huwandu hunoshanduka gore rega rega, nekuti mibairo inochinjawo. Izvi zvinonzi indexing. Gore rega rega, iyo index muzana inosetwa negurukota rezvemitemo uye chengetedzo, mushure mekuverenga ne Statistics Netherlands (CBS). Iyo CBS inoongorora zvinoitika mubhadharo munharaunda yebhizinesi, hurumende nemamwe matunhu. Nekuda kweizvozvo, alimony mari inowedzera neiyi muzana gore rega rega musi wa1 Ndira. Iwe unogona kubvumirana pamwe chete kuti iyo yemutemo indexation haishande kune yako alimony.
Une kodzero yakareba sei yekuchengetwa?
Iwe unogona kubvumirana nemumwe wako kuti muripo wemendenenzi uchaenderera kwenguva yakareba sei. Iwe unogona zvakare kubvunza dare kuti riise muganho wenguva. Kana pasina chakabvumiranwa, mutemo uchaona kuti mari yekuchengetedza inofanirwa kubhadharwa kwenguva yakareba sei. Mutemo uripo iye zvino unoreva kuti nguva yekuriritira yakaenzana nehafu yenguva yemuchato iine makore mashanu. Kune akatiwandei anosiyiwa kune izvi:
Kana, panguva iyo chikumbiro chekurambana chikaiswa, nguva yemuchato inodarika makore gumi nemashanu uye zera remukweretesi wekuchengetedza harisi pasi pemakore gumi kuderera pane zera repenjeni rehurumende rinoshanda panguva iyoyo, chisungo chinopera kana mamiriro epenjeni zera anosvika. Saka izvi zvinosvika makore gumi kana munhu anenge achinetseka ari makore gumi pasati pazera repenjeni yenyika panguva yekurambana. Iko kungangodaro kumisikidzwa kweiyo nyika pension zera shure kwaizvozvo hakukanganisa nguva yechisungo. Izvi zvinosara saka zvinoshanda kumichato yenguva refu.
Chechipiri chisara chine chekuita nemhuri dzine vana vadiki. Mune ino kesi, chisungo chinoenderera kudzamara mwana mudiki akaberekwa muwanano asvika zera regumi nemaviri. Izvi zvinoreva kuti alimony inogona kugara kweanosvika makore gumi nemaviri.
Kusarudzika kwechitatu kuronga kweshanduko uye kunowedzera nguva yekuchengetwa kwevanochengeta chikwereti vane makore makumi mashanu zvichikwira kana roorano yagara kweanosvika makore gumi nemashanu. Kuchengetedza vakweretesi vakazvarwa musi wa50 Ndira kana usati wasvika wa15 vanogashira kuchengetwa kweanosvika makore gumi panzvimbo peanopfuura makore mashanu.
Alimony inotanga kana mutemo wekurambana wapinda muzvinyorwa zvehurumende. Alimony inomira kana nguva yakatarwa nedare yapera. Izvo zvinopera zvakare kana iye anenge achigamuchira akaroorazve, kugara pamwe chete kana kupinda muchibvumirano chakanyoreswa. Kana mumwe wemapati afa, iyo yekubhadhara mari yemamiriyoni inomirawo.
Mune zvimwe zviitiko, aimbova mudiwa anogona kukumbira dare kuti riwedzere mari yacho. Izvi zvaigona kungoitwa kusvika 1 Ndira 2020 kana kumiswa kwesmony kwakange kuchisvika zvakanyanya zvekuti zvaisakwanisika zvine mutsindo. Kubva 1 Ndira 2020, iyi mirawo yakaitwa yakachinjika zvishoma: alimony ikozvino inogona kuwedzerwa kana kumiswa kusinganzwisisike kune iri kugamuchira bato.
Maitiro anogona kutangwa kuona, kugadzirisa kana kugumisa alimony. Uchagara uchida gweta. Nhanho yekutanga ndeye kufaira kunyorera. Mune ino application, iwe unobvunza mutongi kuti aone, kugadzirisa kana kumisa kuchengetedza. Gweta rako rinodhirowa chikumbiro ichi uye rinoendesa kune kunyoreswa kwedare mudunhu raunogara uye kunoitwa kutongwa. Iwe newe wako wawaimboshanda naye hamusi kugara kuNetherlands here? Ipapo iko kunyorera kuchatumirwa kudare kuThe Hague. Wako wepamberi mudiwa achazogamuchira kopi. Se nhanho yechipiri, wako wawaimbova naye mukana wekutumira chirevo chekudzivirira. Mukudzivirira uku anokwanisa kutsanangura kuti sei kuriritira kusingabhadharwe, kana kuti nei mari yacho isingagoni kugadziriswa kana kumiswa. Muchiitiko ichocho pachave nedare redzimhosva umo vaviri vaviri vanogona kutaura nyaya yavo. Shure kwaizvozvo, dare richaita sarudzo. Kana mumwe wemapoka akasabvumirana nedare redzimhosva, anogona kukwidza nyaya yake kudare redzimhosva. Pakadaro, gweta rako rinotumira chimwe chikumbiro uye nyaya yacho inozotariswa zvizere nedare. Uchazopihwa imwe sarudzo. Unogona kukwirira kuDare Repamusorosoro kana iwe zvakare ukapesana nedare redare. Dare Repamusorosoro rinongotarisa kuti Dare reKutsvaga rakadudzira nekushandisa mutemo nemitemo yemaitiro nenzira kwayo uye kuti danho reDare rakanyatsokwana. Naizvozvo, Dare Repamusorosoro haritarise zvakare kukosha kwenyaya iyi.
Iwe une mibvunzo nezve alimony kana iwe unoda kunyorera, chinja kana kumisa alimony? Ipapo ndokumbira ubvunze magweta emhuri e Law & More. Magweta edu akasarudzika mu (re) kukarukureta yesimony. Uye zvakare, isu tinogona kukubatsira iwe mune chero alimony mafambiro. Magweta pa Law & More Nyanzvi mumunda wemutemo wemhuri uye vanofara kukutungamira, pamwe pamwe nemumwe wako, nenzira iyi.
Previous Post Maitiro ekubvunza ku Enterprise Chamber
Next Post Kuramba basa